Pico SBS ကိုသုံး
Get Demo Our Features
Cloud Based Smart Business System
Pico SBS ကို စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည် Cloud Server ကြီးများပေါ်တွင် အသုံးပြုထားသောကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး မြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
Pico SBS ကို Computer, Phone, Tablet များဖြင့်လည်း ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်၍ ကုန်ကျစားရိတ်များကိုလည်း ပိုမိုသက်သာစေသည်။
One System All Business
Pico SBS ကို Convenience store များ၊ ကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင်များ၊ ဖုန်းနှင့် အပိုပစ္စည်းဆိုင်များ၊ ဖုန်းပြုပြင်ဆိုင်များ၊ service လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များ၊ အဝတ်ထည်ဆိုင်များ၊ ဖိနပ်ဆိုင်များ၊ အချိုရည်နှင့် ယမကာ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းများ၊ Beauty Salon များ၊ Bar & Restauant များ၊ စာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ဆာက်ပစ္စည်းဆိုင်များ၊ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများစွာအတွက် အထူးပြု features ပေါင်းများစွာပါဝင်သည့် System တစ်ခုဖြစ်သည်။
Pico SBS ၏ Interactive Reporting System တွင် မိမိလုပ်ငန်း၏ အဝယ်/အရောင်း၊ ကုန်လက်ကျန်၊ ကုန်စာရင်းညှိ၊ ပေးရန်ရှိ/ရရန်ရှိ၊ အသုံးစားရိတ်၊ အရှုံး/အမြတ်၊ ငွေဝင်/ငွေထွက်၊ ငွေစာရင်း၊ ဘဏ်အကောင့်၊ အစမ်းရှင်းတမ်း နှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများ စသည့် မိမိလုပ်ငန်း၏ Report များကို မြန်ဆန်စွာ သိရှိနိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းများအနေနှင့် မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ Report များကို Excel ဖိုင်များ PDF များဖြင့် လွယ်ကူစွာထုတ်ယူနိုင်သည်။
Pico SBS ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များ
Pico SBS ကို စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည် Cloud Server ကြီးများပေါ်တွင် အသုံးပြုထားသောကြောင့် အသုံးပြုသူ User များမှ ကိုယ်ပိုင် server များ ဝယ်ယူရန် မလိုအပ်ခြင်း၊ Server များအတွက် တပ်ဆင်ခ သက်သာခြင်း၊
Server များ၏ Maintenance ကို Pico SBS မှ 24/7 တာဝန်ယူပေးထားသောကြောင့် Maintenance အတွက် ဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းရန် မလိုအပ်ခြင်း၊
Pico SBS ကို Computer များပေါ်တွင်သာမက Phone များ Tablet များတွင် အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် Computer များ ဝယ်ယူရမည့် ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာခြင်း
မိမိလုပ်ငန်း၏ ရောင်းအား၊ ဝယ်အား၊ ကုန်လက်ကျန် Report များ နေရာဒေသမရွေး စက္ကန့်နှင့်အမျှ သိရှိနိုင်သောကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
Pico SBS မှ
အရောင်းဆိုင်ခွဲ၊ ရုံးခွဲ၊ ဂိုထောင်ခွဲများ၊ Currency၊ Financial year၊ Profit margin နှင့် အခွန်ကိစ္စများ စသည်တို့ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
တစ်မျိူးခြင်းပစ္စည်း သို့ မျိူးကွဲပစ္စည်း၊ ယူနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ Barcode & IMEI စနစ်၊ ကုန်လက်ကျန်နှင့်သက်တမ်းကုန်အချက်ပြ နှင့် ရောင်းဈေးအမျိူးမျိူး စသည်တို့ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
ကုန်ဝယ်၊ ကုန်ဝယ်ပြန်ပေး၊ ကုန်ကြွေး/လက်ငင်း ငွေချေစနစ်များ၊ ဘောက်ချာများပုံအဖြစ်သိမ်းခြင်း စသဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
POS နှင့် ကုန်ရောင်းစီမံချက်များ
Quotation တွက်ခြင်း၊ Final အရောင်းဘောက်ချာဖွင့်ခြင်း၊ ကုန်ကြွေး/လက်ငင်း ငွေချေစနစ်များအပြင် POS စနစ်ဖြင့်လည်း မိမိပစ္စည်းများကို လွယ်ကူစွာရောင်းချနိုင်ခြင်း
ကုန်သည်များ၊ ဖောက်သည်များ၊ ရက်ပေး လပေးငွေချေစနစ်များ၊ ရရန်ရှိ စာရင်းများ၊ ပေးရန်ရှိစာရင်းများကို ဘောက်ချာတစ်စောင်ခြင်းအလိုက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
ဝန်ထမ်းများ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရုံးတက်ရုံးဆင်း၊ ရာထူးနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်၊ လစာစီမံခြင်း၊ ကော်မရှင်ပေးခြင်း နှင့် ကြိုငွေထုတ်ခြင်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။
အရှုံးအမြတ်စာရင်း၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ အစမ်းရှင်းတမ်း၊ ငွေဝင်ငွေထွက် နှင့် ဘဏ်အကောင့်များ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
မိမိလုပ်ငန်း၏ နေရာ၊ လ၊ နှစ်အလိုက်၊ ရောင်းအား၊ ကုန်လက်ကျန်၊ အသုံးစရိတ်၊ အရှုံးအမြတ်များကို Graph & Chart များ Excel ဖိုင်များဖြင့် လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်သည်။
78 Street Between 37 and 38 Street , Mandalay.
Pico SBS သည် Convenience store များ၊ ကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင်များ၊ ဖုန်းနှင့် အပိုပစ္စည်းဆိုင်များ၊ ဖုန်းပြုပြင်ဆိုင်များ၊ service လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များ၊ အဝတ်ထည်ဆိုင်များ၊ ဖိနပ်ဆိုင်များ၊ အချိုရည်နှင့် ယမကာ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းများ၊ Beauty Salon များ၊ Bar & Restauant များ၊ စာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ဆာက်ပစ္စည်းဆိုင်များ၊ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများစွာအတွက် အထူးပြု features ပေါင်းများစွာပါဝင်သည့် System တစ်ခုဖြစ်သည်။
Copyright © 2022 Pico Innovation. All Rights Reserved.